Enhle, isikhumba esincinci ngaphandle kwemibhopho liphupha liphi na ibhinqa. Nangona kunjalo, emva kweminyaka engamashumi amathathu, isikhumba siqala ukulahlekelwa ukunyaniseka kwayo, kwaye sidinga uncedo lwethu ukulwa neenguqu ezinxulumene neminyaka. Emzabalazweni wesikhumba esihle, umncedisi wakho unokuba yinkqubo yokusebenzisa i-mesoroner.
I-Mesoroller yinkqutyana encinci eyenziwe yinyithi engenamatshini engenasiphelo, ehlanganiswe nezikhonkwane zensimbi ezincinci (200 pcs), ukusuka kwi-0.2 mm ukuya kwi-2 mm ubude. I-Mesoroller eneesaliti ukuya kwi-1mm ende. ingasetyenziselwa ekhaya, ngokuqinisekileyo ukuba ulandela imigaqo ethile. Kwimeko apho ubude beentsaliti zingaphezu kwe-1 mm, inkqubo kufuneka ilandelwe ngokuthe ngqo phantsi kwesosa lochwepheshe.
Iyintoni inkqubo yokusebenzisa i-mesoroner?
Inkqubo yokusebenzisa i-mesoroner inezenzo ezininzi:
utshintsho olunexesha elidala
Siyabulela kumawaka eemvane ezincinci ezijongene nekhusi ezitholayo kwinkqubo yenkqubo, indlela yokuvelisa i-collagen yayo, eyenza ukuphucula ukuthungwa, i-skin turgor kunye ne-smoothing wrinkles.
Ngenxa yokwakheka kwe-collagen entsha kunye ne-elastin fibers, i-mesoroller inceda ukulwa nezikhenkce ze-congestive ukusuka kwi-post-acne, amanqaku afana, njl njl.
Isizathu esibalulekileyo sokuxhatshazwa kwe-hyperpigmentation yandisa i-melanin kwi-melanocyte-cell eyenza i-melanin. Xa usebenzisa i-mesoroller, i-traano encinci ye-mechanical to melanocyte isetyenziswa kakhulu. Ngenxa ye-microtraumas, kukho ukwehla kwenani leeseli ezinomxholo ophezulu we-melanin.
Ukungabikho kokunyameka kwiiseli yenye yezona zinto ezibangela ukubola kwesikhumba. I-Mesorollersovmestno eneenkcenkca ezikhethiweyo ezikhethiweyo zikunceda ukulwa nale ngxaki. Ukusetyenziswa ngaphambi kwenkqubo, i-agents e-cosmetic ingcono ixhonywe ngesikhumba phantsi kwefuthe le-mesoroller.
Inqubo isebenza njani?
Inkqubo yenzeka kwiinqanaba eziliqela:
Ukusebenzisa i-cocktails eziyimfuneko. Ngomzuzu kukho inani elikhulu leemali, owokukhethayo, ingcali iyanquma, ngokusekelwe kwiingxaki zesikhumba;
Ukuqhuba uvavanyo usebenzisa i-mesoroner. Ubungakanani bombiliso buyi-5-10 imizuzu.
Ukusebenzisa iimaski zokuphumla.
Inkqubo yokusebenzisa i-mesoroller yinkqubo enzima kakhulu, kodwa iqondo lokungahambi kakuhle lixhomekeke kubude bealiti kunye nesithintelo somvandalo.
Ubude bekhosi yokuzihlaziya
Ukuqhuba i-massage ne-mesoroller ekhaya kungenziwa kanye ngeveki.
Ubude bekhosi phantsi kolawulo lweengcali kunye nokusebenzisa i-mesoroller eneenaliti ezide ngaphezu kwe-1 mm ifinyelela-inkqubo ye-3-5. Ikhefu phakathi kweenkqubo yiveki.
Ngexesha lokuvuselelwa kwesikhumba, kuyimfuneko ukucima ukutyelela kwesolarium, ibhafu, ibhuku lokubhukuda, kunye nokuzivocavoca ngomsebenzi osebenzayo.
Kubalulekile ukusebenzisa izilwanyana zokuphilisa nokushiya iindlela eziqhelekileyo zemihla ngemihla, ezona ziimeko ezininzi zineziqholo, i-silicones, izilondolozo. Ngaphantsi kweempembelelo ze-mesoroller ezi zinto zisebenza ngamandla. Ukongeza, kwiimbiza ezivulekileyo ezivela phantsi kwe-cream, i-bacteria iqale ukuvela. Akunakwenzeka ukuba bancede nesikhumba.
Emva kwenkqubo esebenzisa inaliti emide, kunokwenzeka ukwenza i-crusts kwiindawo zokuhamba. Akufanele baxutywe okanye bazame ukususwa.
Ukusetyenziswa ngokusemthethweni kwesikrini selanga, kuba ulusu emva kokuba i-mesoroner ithinteke ngakumbi ngempembelelo engalunganga yelanga.
Ukuba ngaba inkqubo yokusebenzisa i-mesoroner igqitywe ukuba yenziwe ekhaya, akunakwenzeka ukuyigcina kwi-mesoroller ngokwayo. Ama-counterfeits aseTshayina anako kwaye ayazama, kodwa inkohlakalo engabangela ulusu lwayo inokuphulukisa uvuyo lokugcina imali.
Ukulungiswa kwe-Eyebrow: unyango lwe-salon okanye ukunakekelwa ekhaya
Ukulondoloza ulutsha kunye nobuhle besikhumba: ukuhlambalaza ubuso
Izixhobo zokuguga ezikhulayo: kutheni uqala ukuyisebenzisa nini na nini
Indlela yokukrazula i-couperose (inethiwekhi ye-vascular) ebusweni ekhaya?
Sisebenzisa amanzi emvula ukuhlaziywa
Indlela yokongeza intuthuzelo engaphakathi: iingcamango ezi-4 zokubhukuda kwekwindla
Umntwana kwiinyanga ezi-5: urhulumente womhla, uphuhliso olufunekayo
Abazali uZhanna Friske kunye noDmitry Shepelev babelana ngePlato
Ixabiso lomdlali kwi feng shui
I-Detox - ukucoca umzimba weesibisi iintsuku ezingama-7
IHoroscope yeNkunzikazi yeNgonyama ngoJulayi 2017
Umfanekiso wokuqala: into enxiba ngoSeptemba 1?
I-egg yeenwele: inzuzo kunye neendlela zokupheka ezona zilungelelaniso zamakhaya
Ikhekhe lemonyi nge imbewu poppy
Imenyu yokuzalwa komntwana oneminyaka elilodwa